सुशिक्षा र सुसंस्कारले जीवन बाँच्न सजिलो हुन्छ | Mechikali Daily
सुशिक्षा र सुसंस्कारले जीवन बाँच्न सजिलो हुन्छ
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २९ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०६:५८
तुलसी घिमिरे ‘पुष्प’
नेपाल पहाड, हिमाल र तराई भएको विकट भू बनोट भएको मुलुक हो । प्रमुख पेशा कृषि र पशुपालन हो । यी दुवै पेशामा मानव श्रमको खाँचो पर्छ । यो पंक्तिकार पनि पहाडमा जन्मेर गाउँघरमा हुर्केको व्यक्ति हो । पहाड, हिमाल, तरार्इृका प्रत्येक गाउँघरमा हुर्किने केटाकेटीहरुले घरमा घाँस, दाउरा, पानी, बाख्रा चराउने, गाईगोरु चराउने, खेतबारीमा मल फाल्ने, मकै छर्ने, कोदो रोप्ने, धान रोप्ने, डल्ला फोर्ने, धान काट्ने, मकै भाँच्ने, कोदोको बाला टिप्ने र घरमा आइपर्ने सबै काम निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसले व्यवहारिक काम सिक्ने, अनुशासनमा रहने, परिश्रमका कदर गर्ने, गलत संगतमा जानु नपर्ने, सहयोगी भावनाको विकास र लागुऔषधीहरुको अम्मली बनि कुसंस्कारको बाटोबाट जोगिन मद्दत मिल्थ्यो । यस पंक्तिकारको अनुभव हो यो ।
धनको अत्याधिक आगमन झै विलासिताको जीवन बाच्ने पद्धति र खाली समयको प्रशस्त उपलब्धता भएपछि खाली दिमाग शैतानको घर । महानगर र नगरहरुको आराम पसंद जीवन शैलीमा बालबालिकाहरुले बाटो बिराउने र कुलतमा फसेर कुसंस्कारमा हिँड्ने गरेको धेरै पाइन्छ । ठूलाबडा, हुनेखाने र अभिजात्य वर्गहरुमा यो सब हुने गर्छ । बहुसंख्यक परिवारहरुमा स्थायी स्थिर आयको कुनै व्यवस्था छैन । रोग, भोक, अभाव, अशिक्षा, गरिबीको दुश्चक्रले जहा जरो गाडेको छ । जहाँ भरे के खाऊँ ? भालि के खाऊँ ? भन्ने समस्याले जरो गाडेको छ । यस्तो निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गर्न विवश तथा बाध्य परिवारमा बालबालिकाहरुले समेत श्रम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको नेपालाम महशुस भएको छ । वास्तवमा ५ वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका नाबालक केटाकेटीहरुको वर्गमा पर्छन् । यिनीहरु चिन्तामुक्त, फुक्का भएर, खाने, खेल्ने, पढ्ने, उफ्रिने बेला हो । यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, दुःखद विडम्बना के छ भने ५ वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका ६२ लाख २५ हजार बालबालिकाहरु मध्ये १६ लाम ६० हजार बालबालिकाहरु श्रमिकको रुपमा विभिन्न ठाउँहरुमा नेपालाम सेवा गर्न विवश र बाध्य छन् । यो तथ्यांक २०६५ सालको हो । त्यसबेला संयुक्त राष्टसंघ अन्तर्गत रहेको संख्था आइ.एल.ओ.का विश्वमा ५ वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका १६ करोड ५० लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरु विश्वमा बालश्रमिकका रुपाम सेवा गर्न, मजदुरी गर्न विवश र बाध्य पारिएका छन् । विगत ९ वर्षहरुमा विश्वाम हत्या, हिंसा, आतंकवादमा अन्य लाखौं लाख मानिसकहरु, महिलाहरु, पुरुषहरु, केटाकेटीहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् भने टुहुरा बालबालिकाहरु तथा शरणार्थी बालबालिकाहरुको संख्यामा अझ व्यापक वृद्धि भएको पाइन्छ । महिलाहरु तथा बालबालिकाहरुको जीवा अझ समस्याग्रस्त र अझ कष्टकर बनेको पाइन्छ । युद्धग्रस्त अवस्था र प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थाहरु जस्तै भूकम्प, बाढी, पहिरो, भूक्षय, सुनामीको अवस्थामा महिलाहरु र बालबालिकाहरुको अवस्था अझ दयनीय, कष्टकर, भयावह बन्ने गरेको पाइन्छ । २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते नेपालमा आएको भूकम्पमा २०२३ बालबालिकाहरुको असामयिक निधन भएको थियो भने ८०० जना बालबालिकाहरु बेपत्ता भएका थिए । २८७ जना बालबालिकाहरुको माता पिताहरु र आफन्त जनहरुसँग पुनः मिलन गराइएको थियो । ८७६ बालबालिका घाइते भएका थिए । ५९ जना बालबालिकाहरुको आमाबाबु दुवै गुमाएका थिए भने २०३ बालबालिकाहरु ले आमा मात्र, ११२ जनाले बाबु मात्र गुमाएका थिए ।
यसरी प्राकृतिक विपत्तिमा पनि केटाकेटीहरु पर्ने गरेको र थप समस्यामा समेत पर्ने गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्टसंघले यिनै सबै तथ्यहरुलाई हृदयंगम गरेर सन् १९८९ मा बाल अधिकार सम्बन्धी उक महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसपछि विश्वभरि नै प्रत्येक राष्ट्रमा अन्तर्राष्टिय र आन्तरिक रुपमा थुप्रै संघ संस्थाहरुधो बाढी नै आएको पाइन्छ । नेपालले १४ सितम्बर सन् १९९० का दिन (२९ भाद्र २०४७ का दिन) यो महासन्धिमा अनुमोदन गरेर प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ गते बाल दिवस मनाउने गरेको पाइन्छ । आज अमूल्य २८ वर्षहरु बिते तर बालबालिकाहरुमा बालश्रमिक, कैदीबन्दीका बालबालिकाहरु, सडम बालबालिकाहरु, बाल विवाह, लागुपदार्थहरुको ओसारपसारमा बालबालिकाहरुको प्रयोग युद्धहरुमा र बाल वेश्यावृत्तिहरुमा बालबालिकाहरुको प्रयोग रोकिएको पाइन्न भने नेपालामा मोटर ग्यारेजहरु, यातायातका क्षेत्रहरुमा, होटल र रेष्टुरेण्टहरुमा, इट्टाभटामा, सुर्ती उद्योग र बिडी बनाउने उद्योग, चुरापोते निर्माण, गलैंचा उद्योग, मनोरन्जन क्षेत्रमा बालबालिकाहरुको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइन्छ । सन् २००७ मा समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिलाहरु र बालबालिकाहरु (सिविस) नामक एक गैर सरकारी क्षेत्रले काठमाडौँ उपत्यकामा बालश्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी लिन एक सर्वेक्षण गराएको थियो । सन् २००८ को १२ जुनका दिन ७ औं विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस पारेर सिविसका अध्यक्ष मिलन घरेलले सो सर्वेक्षणको तथ्यांकहरु सार्वजनिक गराउनु भएको थियो । प्रस्तुत छन् केही रोचक तथ्यांकहरु ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुमा ६९४ बालबालिकाहरुसँग शोध गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । यसमा ४३४ बालिकाहरु थिए भने २६० बालकहरु थिए । उमेर समूह अनुसार सो सर्वेक्षणमा १५ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहमा ३३३ जना, ११ वर्षदेखि १४ वर्षको उमेर समूहमा २६६जना, १८ वर्ष माथिको उमेर समूहमा ८८ जना, १० वर्षमुनिका १४ जना थिए । बालिकाहरुमध्ये १५ वर्षदेखि १८ वर्षको उमेर समूहमा २२३ जना थिए । ६९४ बालबालिकाहरुमध्ये ५१७ जना विद्यालय जान पाउँदैन थिए । मात्र १७७ जना विद्यालय जाने गर्थे । २६६ जना पूर्ण निरक्षर थिए । ६९४ जना मध्ये ३४१ जनाले पारिश्रमिक पाउँदैन थिए । ३५३ जनामध्ये धेरैको गुनासो घर छाडेर अर्काको घरमा काम गर्नु पर्ने, काम गर्ने समय निश्चित नभएको, ज्यालादारीमा अन्यायपूर्ण असमानता रहेको र फोहोर मैलाको वातावरणमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए । ३९६ जना यो काम छाडेर घर फर्किन चाहन्छन् । यी बाल श्रमिकहरुमध्ये ९ जना बालबालिकाहरु नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका हाकिमहरुको घरमा काम गर्ने भेटिएका थिए । हुने खाने, अभिजात्यवर्गका घरमा कम्लरीहरु तथा अन्य बाल श्रमिकहरु राख्ने चलन छ । ६९४ मध्ये पहाडी मुलका जनजातिका ३३५ जना, तराई मुलका जनजातिका १४२ जना, क्षेत्रीका १३० जना, बाहुनका ६२ जना तथा २५ जना दलित समुदायका थिए । यसरी बाल श्रमिकहरुमध्ये काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका विकट गाउँघरबाट ग्राहकलाई गरिबीबाट उम्किन तथा विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु तथा शिक्षिकाहरुबाट पिटाइ खाएर भागेर राजधानी भित्रिने केटाकेटीहरुको संख्या धेरै थियो ।
हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि आजका ससाना बालबालिकाहरु भोलिका देश संचालन गर्ने नागरिक बन्छन् । तसर्थ, बालबालिकाहरुलाई सही शिक्षा, दिक्षा, संस्कार, अनुशासन, आज्ञाकारिता, परिश्रमी र इमान्दार बनाउनु जरुरी छ । केटाकेटीहरुलाई उनीहरुको आधारभूत आवश्यकताहरु जस्तै खेलकूद गर्न पाउनु, मनोरन्जन गर्न पाउनु पनि जरुरी छ । नेपालाम सेभ द चिल्डेन, साथी, जास, माइती नेपाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, जिल्ला विकास समिति, युनिसेफ, नेपाल बाल सरोकार केन्द्र (सिविन), अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, वातावराण तथा विकास प्रतिष्ठान (इन्हुरेड), यातना पीडित सरोकार केन्द्र (सिभिष्ट), मानव अधिकार संरक्षण् मञ्च, अनौपचाकिर क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) आदि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न स्थापित भएका छन् । तर, बालश्रमिकहरुको अन्त्यका लागि देशभित्रका सुशिक्षित सबै नागरिकहरु, राजनैतिक दलहरु, नेताहरु, कार्यकर्ताहरु सबैको सहयोग, सद्भाव, सत्प्रयासको खाचो देखिन्छ । खासगरी मातापिताहरु र अभिभावकहरुको जिम्मेवारी बढि छ । नेपाल सरकारले सन् २०२० सम्ममा नेपालाम बाल श्रमिकहरुको सम्बन्धमा भएका सबै समस्याहरुको समाधान गरेर उन्मुलन गर्ने कार्यक्रम सावर्जनिक गरेको छ ।
यसका लागि हामीहरु सबैले मन, वचन र कर्मले सेवा गर्नु पर्छ । नेपालाम १२४ भाषा भाषी बोल्ने १२५ जातजातिका मानिसहरु बसोबास गर्छन् । यी सबै माझ सद्भाव, एकता, स्नेह र बन्धुत्व कायम हुनुपर्छ । राजनैतिक स्थिरता कायम गरिनु पर्छ । दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासन देश भित्र कायम गरिनु पर्छ । २०७० सालमा केन्द्रीय बालकल्याण समितिले नेपालमा बालबालिकाहरुबारे एक शोध गरेको थियो । शोध प्रतिवेदन अनुसार ७० जिल्लाहरुमा बालश्रमसँग सम्बन्धित समस्याहरु ब्ढी देखिएका थिए भने ५४ जिल्लाहरुमा बाल विवाहसंँग, ४० जिल्लाहरुमा बाल यौन दुव्र्यवहारसँग, २३ जिल्लाहरुमा सडकमा आश्रित बालबालिकाहरु र २१ जिल्लाहरुमा द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिकाहरुसँग सम्बन्धित समस्याहरु ब्ढी देखिएको थिए ।
२०६८ मा सुसम्पन्न जनगणना अनुसार नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुको गणना गर्दा १,०५,४६,८६३ थिए । यो कूल जनसंख्याको ३९.८ प्रतिशत हुन आउँछ । १८ वर्षसम्म उमेरको गणना गर्दा कूल परिमाण ४४.४ प्रतिशत हुन आउँछ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, बाल मैत्री स्थानीय प्रशासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८, आवासीय बालगृह संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०६९, तेरहां त्रिवर्षीय योजना (२०७०÷०७१ देखि २०७२÷०७३ सम्ममा) र नयाँ नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिका सम्बन्धी धेरै समस्याहरुलाई समेटेको पाइन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनले बालश्रम, लागुऔषध ओसारपसारमा बालबालिकाहरुको प्रयोग, बालविवाह, बन्दिगृहमा रहेका बालबालिकाहरु, सडक बालबालिकाहरु, इट्टाभटा, कोयला खानी, गलैचा, सुर्ती, बिडी र चुरापोते उद्योगहरुमा काम गर्ने सबै बालबालिकाहरुलाई सन् २०२० सम्ममा विकल्प दिएर विस्थापित गर्ने योजना सरकारको छ । यसका लागि हआमी सबले मन, वचन, कर्मले सत्प्रयासहरु गर्नु जरुरी छ । बालबालिकाहरुलाई सिर्जनशील कार्यमा नखटाउने हो भने उनीहरु गलत बाटोमा जाने डर हुन्छ । तसर्थ आजैदेखि सुसंस्कार दिइनु जरुरी छ । मातापिताहरु र अभिभावकहरु यसतर्फ बढी संवेदशनील बन्नु पर्छ । धन सम्पत्ति नभएर पनि सुशिक्षा तथा सुसंस्कार बालबालिकाहरुले पाउनु जरुरी छ । जीवन स्वर्गतुल्य हुन्छ । बाँन्च्न सजिलो पर्छ ।